नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : ओली सरकारको अध्यादेश सँगै नेपालमा फेरी सुरु भयो फोहोरी राजनीति, पार्टी कोही जुट्दै, कोही फुट्दै, साँसद अपहरण शुरु, ओलीको खतरानाक खेल, प्रचण्ड पनि खेल खेल्दै !
ओली सरकारको अध्यादेश सँगै नेपालमा फेरी सुरु भयो फोहोरी राजनीति, पार्टी कोही जुट्दै, कोही फुट्दै, साँसद अपहरण शुरु, ओलीको खतरानाक खेल, प्रचण्ड पनि खेल खेल्दै !
२०५२ साल पछि नेपालमा जुन फोहोरी राजनीति सुरु गरिएको थियो अहिले नेपाल ठीक त्यही बिन्दुमा पुगेको छ । छापामार शैलीमा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश पछि समाजबादी पार्टी फुटाउन साँसद थुन्ने र अपहरन शैलीमा चोर्ने काम शुरु भएको छ भने बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुरलगायतका नेताले नेतृत्व गरेको राजपाबीच पार्टी एकता भएको छ । एकताको कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै समाजवादी पार्टी विभाजन गराउने तयारी पनि अर्को पक्षबाट तीव्र खेल शुरु भएको छ ।
नयाँ पत्रिकाका सम्बाददाता नबिन झाका अनुसार सरकारले पार्टी विभाजनका लागि खुकुलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएको तेस्रो दिन दुई पार्टी एकीकरण भएका छन् । समाजवादी पार्टी र राजपाबीच पार्टी एकतापछि संसद्मा ३४ सांसदसहितको शक्ति बनाउने तयारी छ । एकताको कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै समाजवादी पार्टी विभाजन गराउने तयारी पनि अर्को पक्षबाट तीव्र छ ।
समाजवादीका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा राजपाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादवबीच पार्टी एकता टुंगाउने विषयमा बुधबार राति अ‍ेरसम्म वार्ता भएपछि सहमति जुटेको हो ।
दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि समाजवादी पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ । पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट वरिष्ठ उपाध्यक्ष रेणु यादवसहितका केही सांसदले विभाजनको तयारी गर्न थालेपछि बुधबार दिनभर अध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भटराई र उपेन्द्र यादवले उनीहरूलाई फकाउने प्रयास जारी राखे ।
समाजवादी पार्टीका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, उमाशंकर अरगरिया, कलुदेवी विश्वकर्मा, प्रदीप यादव, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, मोहम्मद इस्तियाक राई, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, रामबाबुकुमार यादव, रामसहायप्रसाद यादव, रुही नाज, रेनुका गुरुङ, रेनुकुमारी यादव, सरिता गिरी, सुरेन्द्रकुमार यादव, डा. सूर्यनारायण यादव ‘सुरज’ र हरिनारायण रौनियार सांसद छन् । रौनियार भने भ्रष्टाचारको मुद्दापछि निलम्बनमा छन् ।
सेतोपाटीका अनुसार समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष एवम् सांसद रेणु यादवको नेतृत्व सो पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउन सात सांसदले निर्णय गरेका छन्।
यादवसहित सांसद महम्मद इस्तियाक राई, प्रदिप यादव, उमाशंकर अरगरीया, कलुदेवी विश्वकर्मा, सुरेन्द्र यादव र रेणुका गुरुङले सो निर्णय गरेको सो समूहका एक सांसदले बताए।
पार्टी विभाजनकै लागि भनेर महोत्तरीमा रहेका सांसद सुरेन्द्र यादव सरकारी सहयोगमा सडकमार्ग हुँदै अहिले काठमाडौं आइरहेको ती सांसदले बताए।
'उहाँ मध्यरातसम्ममा काठमाडौं आइपुग्नु हुनेछ। उहाँले पनि पार्टी विभाजनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ,' ती सांसदले भने।
उनलाई प्रहरीले अपहरण गरेको नभई पार्टी विभाजनमा सहभागी हुन काठमाडौं आउन सरकारको निर्देशनमा सहयोग गरेको बुझिएको छ।
समाजवादी फोरमका प्रतिनिधि सभामा जम्मा १७ जना सांसद छन्।
तर त्यसका लागि एकीकृत पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्नेछ। जुन पार्टी पहिले दर्ता भयो त्यसैले बाजी मार्छ।
समाजवादीका सात सांसदले सभामुखलाई भेटेर छुट्टै दलको मान्यता माग गर्न पनि सक्छन्। त्यसो भयो भने उनीहरूको संसदमा अलग दल हुनेछ।
तर नयाँ अध्यादेश आएकाले पार्टी विभाजन बारेका प्रावधानमा अन्यौल छ। त्यसैले यो विषय अदालतसम्म पुग्न पनि सक्छ।
Posted by www.Nepalmother.com at 9:18 PM